Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAgustin Javier
Indlu ezimeleyo, epholileyo, yanamhlanje, enabo bonke ubutofotofo obudinga wena kunye nosapho lwakho ukuze uhlale kamnandi.
Ifumaneka nje ngeemitha ezili-10 ukusuka elunxwemeni, onokuthi uyijonge ngokuthe cwaka ngelixa usonwabele ikofu yakho ehleli kwiveranda.
Iinkonzo ezongezelelweyo ezilungiselelwe iimfuno zakho.
Kuyo yonke indawo onayo unendlu ezimeleyo enamagumbi amabini okulala anebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, ikhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala elikhulu, igumbi elingasemva, igaraji kunye negadi apho unokonwabela ukujonga umbono omangalisayo wolwandle. , leyo kuyinto nje-10 leemitha phambi kwendlu.
Umoya wendawo yokuhlala usondele, uqhelekile kwaye ugcwele ubomi. Kufuphi kukho iindawo zokutyela ezininzi kunye neekhefi ezinoluhlu olubanzi lwe-gastronomic kwaye ngamaxabiso akhuphisanayo kakhulu. Kwiradiyasi ye-10km; Kukho ezinye iinketho ezifana nolwandle oludumileyo lwaseVaradero, kunye neeklabhu zasebusuku, izikhululo zegesi, abakhenkethi kunye nemisebenzi yokuzonwabisa enomdla kunye neevenkile zesikhumbuzo.
Umbuki zindwendwe ngu- Agustin Javier
Kuyo nayiphi na imeko, siya kuqhagamshelana nge-imeyile, okanye uqhagamshelane ngokuthe ngqo noYusimin okanye uRaynel, oya kukwamkela ngokufudumeleyo kwaye uya kuba khona ukuze akunike lonke ulwazi oluyimfuneko, kunye neenkonzo ezongezelelweyo.
Kuyo nayiphi na imeko, siya kuqhagamshelana nge-imeyile, okanye uqhagamshelane ngokuthe ngqo noYusimin okanye uRaynel, oya kukwamkela ngokufudumeleyo kwaye uya kuba khona ukuze aku…
UAgustin Javier yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Boca de Camarioca